my: changeset 419:9ec84aba84b5e6f550c963441506b393763f50ba
Mercurial > releases > l10n > mozilla-aurora > my / changeset / 9ec84aba84b5e6f550c963441506b393763f50ba
Sat, 08 Apr 2017 12:02:58 +0000
changeset 419 9ec84aba84b5e6f550c963441506b393763f50ba
parent 418 3ddb2ee0f7e530e433fb1d5f6367fdbf19df8e1b
child 420 78fd4ce0459c06d196ccfa7d0fb81d11a30d6b71
push date Sat, 08 Apr 2017 12:03:01 +0000
@@ -80,29 +80,29 @@ chooseDownloadFolderTitle=​ဒေါင်းလုဒ် ချယူမည့်ဖိုဒါအားရွေးပါ:
portableDocumentFormat=သယ်ယူရလွယ်ကူသော စာတမ်းပုံစံ (PDF)
-usePluginIn=%S အားသုံးပါ( %S တွင်)
+usePluginIn=(%S တွင်) %S ကို အသုံးပြုပါ
@@ -179,21 +179,21 @@ actualDiskCacheSizeCalculated=ဝဘ်ယာယီဖိုင်၏ အရွယ်အစားကို တွက်ချက်နေသည်…
actualAppCacheSize=အက်ပလီကေးရှင်း ယာယီဖိုင်သည် လက်ရှိတွင် သိုလှောင်ပမာဏ %1$S %2$S ကို အသုံးပြုနေသည်
totalSiteDataSize=သင့်ဝတ်ဆိုဒ်သိမ်းဒေတာများဟာ လောလောဆယ် %1$S %2$S ပမာဏနေရာယူထားတယ်
-clearSiteDataPromptTitle=ကွတ်ကီးများနှင့် ဆိုက် ဒေတာအားလုံးရှင်းပါ
+clearSiteDataPromptTitle=ကွတ်ကီးများနှင့် ဝဘ်ဆိုက် အချက်အားလုံးကို ရှင်းလင်းပါ
clearSiteDataPromptText=‘ယခုရှင်းပါ’ အားရွေးချယ်ခြင်းသည် ကွတ်ကီးများနှင့် ဆိုက်ဒေတာများအား ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။  သင့်အား ဝတ်ဆိုက်များ နှင့် အင်တာနက်မဲ့သုံး အရာများ မှ ထွက်သွားစေနိုင်ပါသည်။
@@ -214,19 +214,19 @@ spaceAlert.over5GB.message=%S ကို အသုံးပြုရန် နေရာလွတ်မရှိတော့ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ ပြသနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်အချက်အလက်များကို နှစ်သက်ရာအပြင်အဆင်များ > အဆင့်မြင့် > ဝဘ်ဆိုက်ဒေတာ တွင် ရှင်းလင်းနိုင်သည်။
spaceAlert.over5GB.messageWin=%S ကို အသုံးပြုရန် နေရာလွတ်မရှိတော့ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ ပြသနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်အချက်အလက်များကို အပြင်အဆင်များ > အဆင့်မြင့် > ဝဘ်ဆိုက်ဒေတာ တွင် ရှင်းလင်းနိုင်သည်။
spaceAlert.under5GB.message=%S ကို အသုံးပြုရန် နေရာလွတ်မရှိတော့ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ ပြသနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ကြည့်ရှုမှု ရရှိရန်အတွက် နေရာလွတ်အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုကျစ်လစ်ကောင်းမွန်စေရန် “ပိုမိုလေ့လာရန်” သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
-featureEnableRequiresRestart=%S must restart to enable this feature.
-featureDisableRequiresRestart=%S must restart to disable this feature.
+featureEnableRequiresRestart=ယခု လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန် %S ကို ပြန်ဖွင့်ရမည်။
+featureDisableRequiresRestart=ယခု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ရန် %S ကို ပြန်ဖွင့်ရမည်။
+shouldRestartTitle=%S ကို ပြန်ဖွင့်ပါ
okToRestartButton=ယခုပင် %S ကို ပြန်လည်စတင်ပါ
<!ENTITY  trackingProtectionHeader.label       "ခြေရာခံ ကာကွယ်မှုကို အသုံးပြုပါ">
-<!ENTITY  trackingProtectionAlways.label       "အမြဲတမ်း(y)">
+<!ENTITY  trackingProtectionAlways.label       "အမြဲတမ်း">
<!ENTITY  trackingProtectionAlways.accesskey   "y">
-<!ENTITY  trackingProtectionPrivate.label      "သီးသန့်ဝင်းဒိုးများတွင်သာလျှင်(l)">
+<!ENTITY  trackingProtectionPrivate.label      "သီးသန့်ဝင်းဒိုးများတွင်သာလျှင်">
<!ENTITY  trackingProtectionPrivate.accesskey  "l">
-<!ENTITY  trackingProtectionNever.label        "မည်သည့်အခါတွင်မျှ(N)">
+<!ENTITY  trackingProtectionNever.label        "ဘယ်တော့မှ">
<!ENTITY  trackingProtectionNever.accesskey    "N">
<!ENTITY  trackingProtectionLearnMore.label    "ပိုမိုလေ့လာရန်">
-<!ENTITY  trackingProtectionExceptions.label   "(x) ခြွင်းချက်များ…">
+<!ENTITY  trackingProtectionExceptions.label   "ခြွင်းချက်များ…">
<!ENTITY tracking.label                 "ခြေရာခံခြင်း">
-<!ENTITY trackingProtectionPBM5.label         "ခြေရာခံခြင်း ကာကွယ်မှုကို သီးသန့် ဝင်းဒိုးများတွင် အသုံးပြုပါ v">
+<!ENTITY trackingProtectionPBM5.label         "ခြေရာခံခြင်း ကာကွယ်မှုကို သီးသန့် ဝင်းဒိုးများတွင် အသုံးပြုပါ">
<!ENTITY trackingProtectionPBMLearnMore.label "ပိုမိုလေ့လာရန်">
-<!ENTITY changeBlockList.label          "ပိတ်ပင်ထားသည့် စာရင်းကို ပြင်ရန် C">
+<!ENTITY changeBlockList.label          "ပိတ်ပင်ထားသည့် စာရင်းကို ပြင်ရန်">
<!ENTITY changeBlockList.accesskey      "C">
<!-- LOCALIZATION NOTE (doNotTrack.pre.label): includeatrailing space as needed -->
<!-- LOCALIZATION NOTE (doNotTrack.post.label): includeastarting space as needed -->
<!ENTITY  doNotTrack.pre.label          "သင်သည်">
<!ENTITY  doNotTrack.settings.label     "ခြေရာမခံပါနှင့် အပြင်အဆင်များကို စီမံနိုင်ပါသည်">
<!ENTITY  doNotTrack.post.label         ".">
<!ENTITY  suggestionSettings.label      "ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ အကြံပေးချက်များအတွက် အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲရန်…">
<!ENTITY  suggestionSettings.accesskey  "g">
<!ENTITY  acceptCookies.label           "ဝဘ်ဆိုက်များထံမှ ကွတ်ကီးများကို လက်ခံပါ">
<!ENTITY  acceptCookies.accesskey       "A">
<!ENTITY  acceptThirdParty.pre.label      "ကြားခံဝန်ဆောင်မှုများထံမှ ကွတ်ကီးများကို လက်ခံပါ">
<!ENTITY  acceptThirdParty.pre.accesskey  "y">
-<!ENTITY  acceptThirdParty.always.label   "အစဉ်အမြဲ">
+<!ENTITY  acceptThirdParty.always.label   "အမြဲတမ်း">
<!ENTITY  acceptThirdParty.never.label    "ဘယ်တော့မှ">
-<!ENTITY  acceptThirdParty.visited.label  "လည်ပတ်ကြည့်ရှုပီးသည်မှ">
+<!ENTITY  acceptThirdParty.visited.label  "ကြည့်ရှုထားသည့် နေ့မှစ၍">
-<!ENTITY  keepUntil.label               "ထိုအချိန်ထိ သိမ်းထားပါ u၊">
+<!ENTITY  keepUntil.label               "ထိုအချိန်ထိ သိမ်းထားပါ">
<!ENTITY  keepUntil.accesskey           "u">
-<!ENTITY  expire.label                  "သူတို့ သက်တမ်းပြီ">
-<!ENTITY  close.label                   "&brandShortName; ကို ပိတ်လိုက်တယ်">
+<!ENTITY  expire.label                  "သက်တမ်းစေ့လျှင်">
+<!ENTITY  close.label                   "&brandShortName; ကို ပိတ်မည်">
-<!ENTITY  cookieExceptions.label        "E ခြွင်းချက်များ...">
+<!ENTITY  cookieExceptions.label        "ခြွင်းချက်များ…">
-<!ENTITY  showCookies.label             "Sကွတ်ကီးများကို ​ပြသပါ...">
+<!ENTITY  showCookies.label             "ကွတ်ကီးများကို ​ပြသပါ...">
-<!ENTITY  historyHeader.pre.label          "&brandShortName; will:">
+<!ENTITY  historyHeader.pre.label          "&brandShortName; သည်">
<!ENTITY  historyHeader.pre.accesskey      "w">
-<!ENTITY  historyHeader.remember.label     "မှတ်တမ်းကို မှတ်ထားပါ">
+<!ENTITY  historyHeader.remember.label     "မှတ်တမ်းကို မှတ်ထားမည်">
<!ENTITY  historyHeader.dontremember.label "မှတ်တမ်းကို ဘယ်တော့မှ မမှတ်ထားနဲ့">
<!ENTITY  historyHeader.custom.label       "မှတ်တမ်းအတွက် စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးချက် အပြင်အဆင်များကို သုံးစွဲပါ">
<!ENTITY  rememberDescription.label      "&brandShortName; သည်သင်၏ရှာဖွေမှူများကိုမှတ်သားထားပေးမည်ဖြစ်သည်။">
-<!ENTITY newprofile.title             "Create Profile Wizard">
+<!ENTITY newprofile.title             "ပရိုဖိုင်းလ် ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်း">
-<!ENTITY profileCreationExplanation_1.text  "&brandShortName; stores information about your settings and preferences in your personal profile.">
-<!ENTITY profileCreationExplanation_2.text  "သင်ဟာ အကယ်လို့ဤ &brandShortName; ၏ ထပ်တူပွားအား အခြားအသုံးပြုသူများဖြင့် ဝေမျှသုံးဆွဲပါက သင်သ​ည် အချက်အလက်များကို သပ်သပ်စီခွဲထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသူ တစ်ယောက်လျှင် ပရိုဖိုင် တစ်ခုဆီထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။">
+<!ENTITY profileCreationExplanation_1.text  "&brandShortName; သည် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းလ်ရှိ အပြင်ဆင်များနှင့် နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ချက်များကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါသည်။">
+<!ENTITY profileCreationExplanation_2.text  "သင်သည် &brandShortName; ကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေအသုံးပြုနေပါက အသုံးပြုသူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အချက်အလက်များကို သီးခြားစီ ဖြစ်နေစေရန် ပရိုဖိုင်းလ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ သီးခြားစီ ဖြစ်နေစေရန် အသုံးပြုသူ တစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ ပရိုဖိုင်းလ်ကို ဖန်တီးထားသင့်သည်။">
<!ENTITY profileCreationExplanation_3.text  "&brandShortName; အားသင်တစ်ယောက်တည်း သုံးဆွဲသည်ဆိုသော်လည်း ပရိုဖိုင်တစ်ခု အနည်းဆုံးထားရှိရမည်ဖြစ်သည် ။ သင်စိတ်ရှိပါကလဲ တစ်ခုထက်ပိုသော ပရိုဖိုင်များအား ဆောက်ထားနိုင်ပြီ အပြင်အဆင်အမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော လုပ်ငန်းသုံး ပါဆင်နယ်တစ်ကိုယ်ရည် သုံး ခွဲထားခြင်း။ ">
<!ENTITY profileCreationExplanation_4.text  "သင့်၏ profile ကို စတင်တည်ဆောက်ရန် Next ကိုနှိပ်ပါ">
<!ENTITY profileCreationExplanation_4Mac.text  "သင့်၏ profile ကို စတင်တည်ဆောက်ရန် Continue ကိုနှိပ်ပါ">
<!ENTITY profileCreationExplanation_4Gnome.text  "သင့်၏ profile ကို စတင်တည်ဆောက်ရန် Next ကိုနှိပ်ပါ">
<!ENTITY profileCreationIntro.text      "သင့်တွင် ပရိုင်ဖိုင်များ စွာရှိပါက ယခုသည်သင် နာမည်များအား မတူအောင်ပေးထားနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဤတွင်ပေးထားသော နာမည်အားသုံးလိုကသုံး မသုံးလိုက သင်ကိုယ်တိုင်ပေးပြီးသုံး။">
<!ENTITY profilePrompt.label            "Eပရိုဖိုင်နာမည် အသစ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ:">
<!ENTITY profileDirectoryExplanation.text   "သင်၏ အသုံးပြုသူ settings, preferences နှင့် အခြားသော အသုံးပြုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါသည်။">
<!ENTITY profileDefaultName             "အမြဲအသုံးပြုသောသူ">
<!ENTITY button.choosefolder.label      "ဖိုင်တွဲရွေးပါ">
<!ENTITY button.choosefolder.accesskey  "ဖ">
<!ENTITY button.usedefault.label        "U စံဖိုဒါအဖြစ်သုံး">